Mareykanka oo markale duqeymo ku beegsaday Al-Shabaab gudaha gobolka Mudug - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMareykanka oo markale duqeymo ku beegsaday Al-Shabaab gudaha gobolka Mudug
Mareykanka oo markale duqeymo ku beegsaday Al-Shabaab gudaha gobolka Mudug
November 21, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Todobo dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab ayaa lagu dilay duqeyn ka dhacday Soomaaliya.
Duqeynta ayaa Talaadadii ka dhacday deegaanka Qaycad ee gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya, sida ay bayaan ku sheegeen taliska Mareykanka ee Africa.
Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa intaas ku daray in dad shacab ah aysan wax dhibbaato ah kasoo gaarin weerarka.
Kani waa weerarkii labaad oo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab oo ka dhaca gobolka Mudug intii lagu guda jiray asbuucaan.
Mareykanka ayaa sheegay in ay 37 dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab ku dileen duqeymo Isniintii ka dhacay gobolka Mudug.
Mareykanka ayaa kordhiyay duqeymaha ka dhanka ah maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan Soomaaliya tan iyo horaantii sanadkii 2017-kii, balse maleeshiyada ayaa weli ku harsan dhanka koonfureed ee dalka, sidoo kale waxay gudaha caasimada Muqdisho ka fulisaa weeraro dhimasho leh.
November 20, 2018 Tobonaan dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeymo Mareykanku ka fuliyay gobolka Mudug
Al-Shabaab oo nabadoon ku dishay magaalada Beled Xaawo
Somali President appoints information minister as new mayor of Mogadishu
Mogadishu-(Puntland Mirror) Somali Minister of Information Abdirahman Omar Osman aka “Yariisow” has been appointed the new mayor of Mogadishu, statement from the office of Somali President Mohamed Abdullahi Farmajo said Sunday. The President’s statement comes [...]